मन्दिरमा किन राखिन्छ घन्टी ? जान्नुहोस् धार्मिक र वैज्ञानिक कारण - Deshko News Deshko News मन्दिरमा किन राखिन्छ घन्टी ? जान्नुहोस् धार्मिक र वैज्ञानिक कारण - Deshko News
मन्दिरमा किन राखिन्छ घन्टी ? जान्नुहोस् धार्मिक र वैज्ञानिक कारण
धार्मिक कारण : मन्दिरबाहिर, प्रवेशद्धार, भित्र वा वरिपरि जताततै घन्टी राखिएको हुन्छ । मन्दिर गएपछि घन्टी बजाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तसर्थ, जानीनजानी पनि मन्दिर प्रवेश गर्नुअघि दर्शानार्थीले घन्टी बजाउँछन् ।
घन्टी बजाउँदा पाप भाग्ने र शक्ति प्राप्त हुने आगमशास्त्रमा उल्लेख छ । घन्टीको आवाज देवीदेवतालाई सुमधुर लाग्छ भन्ने अर्को मान्यता पनि प्रचलित छ । वैज्ञानिक कारण स्मन्दिर प्रवेश गरेसँगै घन्टी बजाउँदा मनलाई सफा र जागरुक बनाउँछ । साथै, ध्यानलाई पुर्ण रुपमा केन्द्रित गर्दै भक्तितिर आकर्षित गर्दछ ।